Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho - Awdinle Online
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa Ciidamo ka tirsan kuwa Boliska Soomaaliya lagula eegtay degaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada muqdisho, waxaana jira khasaaro ka dhashay qaraxaas.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in qaraxa lala beegsaday Ciidamada Booliiska gaarka u tababaran ee Haramacad kuwaas oo ilaaliya Shaqaalaha iyo Ingineerada Shirkadda dhiseysa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo dhismaheedu marayo isla deeganaka Ceelasha biyaha.
Wararka la helay ayaa waxaa ay sheegayaan in qaraxa ay ku dhaawacmeen Saddex Askari oo ka tirsan Ciidamada Booliska, kuwaas oo dhaawacooda loo soo qaaday dhinaca Magaalada Muqdisho.
Qaar kamid ah dadka ku nool degaanka Ceelasha Biyaha ayaa waxaa ay sheegeen in muddo ka badan saacad ay hakad galeen isku socodka dadka iyo Gaadiidka wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye wallow markii dambe dib loo furay.
Shaqaalaha iyo Ingineerada shaqada ka haya wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye ayaa dhowr jeer la qarxiyay, waxaana kasoo gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kuwaas oo weli Shaqadooda wata.
Previous articlePuntland oo dambiile u aqoonsatay dadka diidan lacagta Shillin Soomaaliga
Next articleDad isku qoys ah oo lagu dilay hal goob & faah faahin laga helayo